अस्पताल छिरेको भालुको आज प्रसूति कक्षमै बास, अझै दुई दिन त्यतै — Imandarmedia.com
अस्पताल छिरेको भालुको आज प्रसूति कक्षमै बास, अझै दुई दिन त्यतै
ताप्लेजुङ। फुङलिङका बासिन्दाको ध्यान यतिबेला ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा छ। कारण कुनै खास प्रकारको बिरामी, उपचार वा योजना आएकाले होइन। बिहीबार बेलुका साढे १० बजेतिर अस्पतालको कोठामा हिमाली कालो भालु पसेको थियो। त्यसलाई भित्र थुनिएको छ।
थुनिएको भालुले अझै दुई रात अस्पतालमै बिताउनुपर्ने भएको छ। उद्धारका लागि वन्यजन्तुको प्राविधिक टोली चितवनबाट बोलाइएको छ । टोली आइतबार मात्रै आइपुग्ने भएकाले भालुको अस्पताल बसाइ लम्बिने भएको हो।
बिरामी सुतेको मौका पारेर शुक्रबार राति ढोका खोलिदिएर भालुलाई बाहिर पठाउने कि प्राविधिक टोली बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अस्पतालमै छोड्दा सेवाग्राही आतंकित हुने भएकाले टोली नै बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख वीरेन्द्र साहले बताए।
उनका अनुसार शुक्रबार तयारी पूरा गरेर प्राविधिक टोली शनिबार बिहानै चितवनबाट हिँड्ने भएको छ। वन्यजन्तुलाई बेहोस बनाएर उद्धार गर्ने टोली चितवन, बर्दिया र काठमाडौंमा मात्रै छ। उद्धार टोलीमा एक भेटेरिनरी डाक्टर, एक वन्यजन्तु विज्ञ र २/३ जना फिल्ड स्तरको कर्मचारी हुन्छन्।
डाक्टरले भालुलाई लठ्याउँछन् र अरूले उद्धार गरेर जंगलमा लगेर छोडिदिन्छन्, साहले भने। भालुको बासस्थान मिल्ने जंगलमा लगेर छोडिदिने उनले बताए । एकै दिनमा पुग्न कठिन हुने भएकाले प्राविधिक टोली आइतबार आएर तुरुन्तै उद्धार गर्ने योजना रहेको जानकारी उनले दिए।
कहाँ लगेर छोड्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। त्यतिञ्जेलसम्मका लागि त्यही कोठामा मासु दिएर राखिने छ। भालुलाई शुक्रबार बिहान बंगुरको ५ केजी मासु दिएको वन कार्यालयका ललित साहले बताए।
खाट मुन्तिर लुकेर बसेको छ। भालुले मासु त्यहींबाट तानेर खाएको थियो, उनले भने। बिहीबार बेलुका जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी रेशा श्रेष्ठ लावतीले क्वार्टर फर्कंदै गर्दा भालु देखेकी थिइन्।
क्वार्टर फर्कंदै थिएँ, मेरो अलिक अगाडि सिँढीबाट झर्दै थियो, उनले भनिन्, ‘मनमनै कत्रो कुकुर रहेछ भन्दै उकालो गएँ, भरे पो भालु भालु भनेपछि मलाई नि डर लाग्यो।
उनका अनुसार भालु डाक्टरहरूको क्वार्टर नजिकैबाट ओरालो झरेको हो। अस्पतालभित्र भने बिरामीका कुरुवाले त्यसलाई फोहोर खाँदै गरेको देखेका थिए। अस्पतालका कर्मचारी गोपाल आचार्यका अनुसार ती कुरुवाले ‘कत्रो कुकुर पस्यो! भनेपछि अरू चार/पाँच जनाले गएर हेर्दा भालु भनेर ठम्याए।
तत्काल चेनगेट लगाएर बिरामी भएतिर पस्ने ठाउँ बन्द गरिदिए। त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गरे। प्रहरी, कर्मचारी, कुरुवा पुग्दा भालु प्रसूति कक्षमा पसिसकेको थियो। चेनगेट खोलेर भित्र पसेको प्रहरीले तत्काल बाहिरबाट ढोका लगाएर भालुलाई थुनेको थियो।
थुनिएको कोठाबाट बाहिर निस्कन भालुले झ्याल–ढोका फुटाउने प्रयास गरेको थियो। झ्यालमा लगाएको फलामको रोल बंग्याएको छ। अस्पतालका प्रमुख डा. सोनिम लामाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘अब हुँदाहुँदा भालुले समेत अस्पताल आएर तोडफोड र हुलदंगा मच्चाउन थाल्यो बा।
मान्छेले मात्रै नपुगेर, लौन सरकार अस्पतालमा चारैतिर पर्खाल लगाउने र सुरक्षागार्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो।भालु अस्पतालको शवगृहबाट भित्र पसेको हुन सक्ने अनुमान छ।
अस्पताल रहेको क्षेत्रमा जंगल पनि छ। कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका संरक्षण अधिकृत रमेश यादवका अनुसार भालु करिब ७/८ वर्षको जस्तो देखिएको छ। चिसोले गर्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट न्यानो खोज्दै औलतिर झरेको हुन सक्ने अनुमान छ।
यो समय भालु सुत्केरी हुने र औलमा सुत्केरी हुँदा आहाराको खोजीमा निस्कन सक्ने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको अड्कल छ ।दुई प्रकारका भालुमध्ये यो हिमाली कालो भालु भएको यादवले बताए।
डिभिजन वन कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ। प्रदेश सरकारले वन्यजन्तु उद्धार टोली अहिलेसम्म बनाएको छै। त्यसको प्रभाव थुनिएको भालुले आफ्नो बासस्थान फर्कन लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
‘हामी प्रदेशको भएकाले विभागमा जाहेर गर्‍यौं, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजनासँग समन्वय गर्‍यौं, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘प्रदेशमै उद्धार टोली भएको भए अलिक चाँडो हुने थियो।